Mpanamboatra sy orinasa Factory Super Rig tsara indrindra SD2200 | SINOVO
SD2200 dia milina fantsom-bovoka feno-miasa feno miaraka amin'ny haitao iraisam-pirenena mandroso. Tsy vitan'ny fandavahana fantsona mankaleo, fandavahana kambana, fametahana mahery vaika amin'ny fototra malefaka, fa koa misy ny fiasan'ny rig ary ny crane crawler. Izy io koa dia nihoatra ny rig fandavahana rotary nentim-paharazana, toy ny fandavahana lavaka lalina, fitambarana tonga lafatra miaraka amin'ny rig fandavahana casing feno hanaovana asa sarotra.
Rig feno fandavahana multifunctional hydraulic SD2200
Fikorianan'ny paompy lehibe
Esory ny hafainganam-pandeha
Herin'ny vahoaka Max
Max hery hisintona
Vokatry ny vahoaka
Tarika tsipika (hery 1st sosona) ny winch lehibe
Lind hafainganam-pandeha max winch lehibe
Tady savaivony ny Winch fanampiana
Tarika tsipika (hery 1st sosona) Winch fanampiana
Savaivony savaivony ny baran'ny kelly
HQY5000A Angona teknikan'ny crane (fahafaha-manandratra 70 taonina)
Max naoty fanamafisana 70 t
Ny halavan'ny boom 12-54 m
Ny halavan'ny jib raikitra 9-18 m
Boom + jib max halavany 45 + 18 m
Zoro mampihomehy boom 30-80 °
Kaody 70/50/25/9 t
Fisondrotana winch / ambany ambany
* Haingam-pandeha 116/58 m / min
Hafainganana 80/40 m / min
Hoch Winx hoiste / ambany
Boom hoist Tady Dia 20 52 m / min
Boom ambany 52 m / min
Hafainganana mitsivalana 2,7 r / min
Hafainganana amin'ny dia 1,36 km / h
Fahaizana manaja (miaraka amina boom fototra, ao aoriana ao) 40%
Angovo diesel nanome isa fahefana / rev 185/2100 KW / r / min
Vatan'ny crane manontolo (tsy misy siny misambotra) 88 t（miaraka amina boom 70 hook ton
Fanerena mafy 0,078 Mpa
Voamarika: ny hafainganam-pandeha miaraka amin'ny * dia mety miovaova arakaraka ny enta-mavesatra.
HQY5000A Data ara-teknika (Tamper)
Kilasy manelingelina 5000 KN.m (Max12000KN.m)
Ny lanjan'ilay marotoa 25 t
Ny halavan'ny fipoahana (boom-by vy) 28 m
Zoro miasa Boom 73-76 °
Kaody 80 / 50t
Fitaovana winch lehibe
Tady Dia 26
Main winch ambany
Boom hoist Tady Dia 16 52 m / min
Angovo maotera / rev 199/1900 KW / r / min
Misintona tady tokana 20 t
Haavon'ny fiakarana 28.8 m
Taratra miasa 8.8-10.2m
Fepetra fitaterana vano lehibe （Lx Wx H） 7800x3500x3462 mm
Ny lanjan'ny vano manontolo 88 t
Ny lanjan'ny fanoherana 30 t
Max habetsahan'ny fitaterana tokana 48 t
Manenjika ny rotator dia 1500MM（tsy voatery）
Famaritana lehibe momba ny rotator casing
Ny savaivony 800-1500 mm
Torkia mihodina 1500/975/600 kN.m Max1800 kN.m
Hafainganana mihodina 1.6 / 2.46 / 4.0 rpm
Fanindriana ambany kokoa amin'ny casing Max 360KN + lanja tena 210KN
Misintona herin'ny casing 2444 kN Max 2690 kN
Kapoka mahasarika tsindry 750 mm
Lanja 31 taonina + (crawler tsy voatery) 7 taonina
Famaritana lehibe momba ny tobin-herinaratra
Modely maotera (ISUZU) AA-6HK1XQP
Herin'ny motera 183.9 / 2000 kw / rpm
Fanjifana solika 226.6 g / kw / h (max)
lanja 7 t
Modely fanaraha-maso Fanaraha-maso lavitra tariby
SD2200 dia milina fantsom-bovoka feno-miasa feno miaraka amin'ny haitao iraisam-pirenena mandroso. Tsy vitan'ny fandavahana fantsona mankaleo, fandavahana kambana, fametahana mahery vaika amin'ny fototra malefaka, fa koa misy ny fiasan'ny rig ary ny crane crawler. Izy io koa dia nihoatra ny rig fandavahana rotary nentim-paharazana, toy ny fandavahana lavaka lalina, fitambarana tonga lafatra miaraka amin'ny rig fandavahana casing feno hanaovana asa sarotra. Izy io dia mety indrindra amin'ny fananganana antontam-piavy, antontam-pako, fantsom-pototry ny seranan-tsambo sy ranomasina ary fananganana antontam-bato avo lenta. Ny rig super drilling vaovao dia manana tombony amin'ny fahombiazan'ny fananganana avo, ny fanjifana angovo ambany ary ny tombony maitso, ary manana ny asan'ny intellectualization sy ny tanjona maro. Ny rig super drilling dia azo ampiasaina amin'ny karazan-tany sarotra, toy ny Cobble sy Boulder stratum, hard rock stratum, karst cave stratum ary matevina quicksand stratum, ary azo ampiasaina ihany koa handravana ireo antontam-bato antitra sy fako.
Fomba fandavahana Rotary
Manampy sy manitatra ny asan'ny antontam-pivoarana.
Ny fiatraikany amin'ny tantanana.
Mandefasa casing, fiarovana amin'ny rindrina ary fiasa fandavahana casing.
Fampiakarana vano fiompy kankana
Fanamafisana tranokala mpamily antontam-bato sy fiasan'ny fitaovana fandavahana
Ity milina ity dia misy fampiasa maro, afaka mampiasa karazana siny fandavahana rotary sy fitaovana fandavahana ho an'ny fandavahana rotary, fiasa, miaraka amin'izay koa, mampiasa ny tombotsoany manokana amin'ny karazana fitaovana amin'ny iray, motera hanomezana angovo, fitsitsiana angovo , toekarena maitso.
Ny fanjifana solika ambany sy ny fahombiazan'ny fananganana avo, ny fantsom-pitrandrahana dia azo atsangana haingana sy ampidinina.
Masinina iray no azo ampiasaina amin'ny fandavahana rotary. Izy io koa dia azo ampiasaina ho crane crawler sy milina fampidinana mavitrika.
Chassis crane mandady mahery miaraka amin'ny fahamarinan-toerana lehibe, mety amin'ny fandavahana torsiatra lehibe, ary koa ny fandavahana lavaka faran'izay lalina.
Fampifangaroana tanteraka ny rig fandavahana casing feno ho an'ny kapila goavam-be, ny fahatsapana ny fampidirana multi-functional ny milina fandavahana, ny fandavahana kapila, ny fihadiana fihodinana, ny tantely mavesatra, ny vatolampy mafy, ny fakana ny vatolampy, vaky ireo fantsona taloha.
Ny rig super drilling dia manana tombony amin'ny fampidirana avo, faritra fananganana kely, mety amin'ny tetik'asa fotodrafitrasa monisipaly an-tanàn-dehibe, fananganana fotodrafitrasa renirano an-dranomasina, mitahiry vola be amin'ny fananganana fanampiana.
Ny maodelin'ny teknolojia Al dia azo alefa mba hahatsapany ny fahaizana ara-tsaina ny fitaovana.
Teo aloha: Crane Crawler Hydraulika CQUY55
Fitrandrahana tratra boreholes
Bits tsy misy coring